Rebuzz: Njikwa Azụmaahịa Ahịa | Martech Zone
Tọzdee, Ọktoba 11, 2007 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Ọ bụ okwu ugha nke nwụrụ afọ ole na ole gara aga mana ọ na-enwetaghachi ike. Enwere m mmasị na nkwupụta a sitere n'aka onye edemede, Gerry Brown:
Otu ihe doro anya - ndị mgbasa ozi na ndị na-azụ ahịa na-aghọta na web bụ isi iyi dị mkpa nke ozi ahịa na ọwa dị ike nke nkwukọrịta maka ndị ahịa. Ka ahịa ahụ na-eto, ndị isi ahịa na-apụta, a ga-enwe mmụba ngwa ngwa nke imefu ego. CRM nwere ike bụrụ ntakịrị ihe ekwesighi, mana usoro ịhazi usoro azụmaahịa nke ụlọ ọrụ zuru oke nke websaịtị ga-adị ebe niile.
Isi Iyi: Onye isi IT